ओलीको आमसभा : ३ लाखकाे लक्ष्य, कहाँ बाट कति भयत उपस्थित ? - हेल्लो चितवन अन्लाईन्
ओलीको आमसभा : ३ लाखकाे लक्ष्य, कहाँ बाट कति भयत उपस्थित ?
February 5, 2021 मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
माघ, काठमाडाैं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तापक्ष केपी ओली समूहको शक्ति प्रदर्शन तथा आमसभा अहिले दरबारमार्ग नारायणहिटी अगाडि भइरहेको छ। सभालाई प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेताहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, सत्यनारायण मण्डल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सम्बोधन गर्दैछन्। सभाका लागि विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्याकर्ता काठमाडौंमा भेला भएका छन्।
केशरमहलदेखि जयनेपाल हलसम्म र दक्षिणतर्फ तीनधारा पाठशालासम्मको सडक खाली बनाइए पनि साढे १२ बजेसम्म उल्लेख्य संख्यामा मानिस जम्मा भएको देखिँदैन थियो। त्यस्तै साँगा भञ्ज्याङ्गबाट केही सवारी साधनमा सहभागी भित्रिएका देखिए पनि भने नुवाकोट र नागढुंगा नाकाबाट उल्लेख्य संख्यामा आएको देखिँदैन।
फर्पिङ्गबाट आज बिहान २ वटा टाटा सुमोमा सहभागी ल्याइएको थियो। सिस्नेरी नजिकै बाटो मर्मत भएकाले उक्त मार्गबाट सवारी साधन थोरै चलेको बताइन्छ। उपत्यकाबाहिरबाट आज बिहानसम्म कार्यक्रमको सहभागी बोकेको सवारी साधन खासै नछिरेको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ। नागढुंगाबाट भित्रिएको सवारी साधनलाई हेर्दा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ।
आज बिहान नागढुंगा नाका हुँदै भित्रिएका ओलीपक्षीय नेता तथा कार्यकर्ता र सहभागीहरुको संख्या मोटामोटी प्रदेश १ बाट ९ वटा साधनमा ३ सय जना, प्रदेश २ बाट १ सय ६ वटा साधनमा ३ हजार ९ सय जना, बाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ६ वटा सवारी साधनमा डेढ सय जना रहेका छन्।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट २५ वटामा सातसय जना, लुम्बिनीबाट ४ वटामा १ सय ४८ जना, कर्णालीबाट ३ वटामा १ सय दुई जना र सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट कुनै पनि सवारी साधन र सहभागी आएको देखिँदैन। उपत्यका बाहिरबाट नागढुंगा भएर डेढ सयवटा मझौला सवारी साधनमा पाँच हजार तीन सय ९७ जना उपत्यका छिरेको ट्राफिक प्रहरीको रेकर्डबाट देखिन्छ । साना, निजी र टाटासुमो गरी ३८ वटामा दुई सय ६० जना भित्रिएको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ।
बूढानीलकण्ठबाट दुई सय करिबको जुलुश आएको छ भने पाटनबाट हरिकृष्ण ब्यन्जबकारले पाँच सय जनाको जुलुशलाई नेतृत्व गरेका छन्। गणेश बस्नेत नेतृत्वको पार्टीनिकट पत्रकार टोली पनि प्रदर्शनीमार्गबाट दरवारमार्गतिर मोडिएको छ।@लोकपाटी